Dhacdo Xanuun badan oo shalay ka Dhacday Muqdisho iyo Cabsi lasoo daristay gabdhaha « AYAAMO TV
Dhacdo Xanuun badan oo shalay ka Dhacday Muqdisho iyo Cabsi lasoo daristay gabdhaha by Maamule b 1 of 1
673 Views Date February 20th, 2014 time 1:16 pm
Wararka aan ka heleyno Degmada Kaaraan ee Gobolka Banaadir ayaa sheegaya in dabley Hubeesan shalay ay afduub u geesteen gabar dhalinyaro ah kadibna kula dhaqaaqeen Kufsi iyo jir dil aad u xoogan.
Kooxaha Hubeesan ayaa la sheegay in gabar Da’deeda lagu qiyaasay 18-jir ay afduubteen kadibna ay jir dil iyo kufsi isugu dareen ,taa oo ugu dambeyn keentay in gabadhaasi ku geeriyooto Isbitaalka Keesaney oo la geeyay.
Gabadhan dhibka loo geestay ayaan wali la ogeyn halka laga afduubtay , waxaasa arintan aad uga argagaxay Dadkaku dhaqan Degmada Kaaraan iyo intii ka war heshay Falkan naxariista daran , waxa ayna dhacdadan cabsi badan ku beertay gabdhaha kunool Muqdisho oo iyana ka cabsi qaba in falkan oo kale loo geesto.
Kooxihii Dableyda ahaa ee falkan ka dambeysay ayaa la tilmaamay in aan wali gacanta lagu dhigin , mana jiro wax war ah oo kasoo baxay Maamulka Dowlada ee Degmada Karaaan oo falkan ka dhacay Maalintii shalay.
Dhawaan ayey aheed Markii Hay’ado u dooda Xuquuqda aadanaha Shaaca ka qaadeen in Falalka Kufsiga Dalka Soomaaliya uu caadi ka noqday , waxaana sanadihii ugu dambeeyay Soomaaliya ka dhacay kufsi siyaabo kala duwan dumar masaakiin ah loogu geestay.